Akhriso Taariikhda Ururkii gobanimodoonka Somaliyeed ee SYL Oo Loo Dabaal Dagayo Aas Aaskiisii | HobyoNet.Com
Sunday, May 14th, 2017 | Posted by news1
Akhriso Taariikhda Ururkii gobanimodoonka Somaliyeed ee SYL Oo Loo Dabaal Dagayo Aas Aaskiisii
Halgankii ummadda Soomaaliyeed Ee uu hogaanka u soo hayay xisibgii SYL iyo qaar ka mid ah halgamayaashii dalka u soo halgamay waxay aheyd talaabo loo qaaday dhanka sidii la isaga qaadi lahaa heeryadii guumaysiga isla markaana ummada Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa xoriyad taam ah.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayey suurtagal tahay inaanay maanta la socon inay tahay maalin quluubta shacabka Soomaaliyeed kaga taal meel muhiim ah, isla markaana taariikhda Dalka Soomaaliyeed ka gashey baal dahab.
Waxaa sidoo kale si buuxda u soo baxdey inay jiraan dad badan aan fahmansaneyn qiimaha ay leedahay xorimada iyo in dad waliba uu yeesho calan iyo dawlad caalamka laga aqoonsan yahay.
Xoriyadii ummada Soomaaliyeed ay hanatey sanadkii 1960-kii waxaa loo marey halgan aad u dheer oo dhiig badani ku qabtey, isla markaana halgamayaal fara badani ay maalmooda iyo naftooda u hureen, si ummada Soomaaliyeed ay u helaan xornimo, iyadoo xiligaasi ay aheyd xili ay qaaradan Afrika ay si weyn ug halgamaysay xoriyada iyo inay iska qaado heeryadii guumaysatayaashii reer Yurub.
Xiligaasi waxaa qaarada Afrika ka shidnaa shulcad loogu magacdaray “Kacdoonkii Xoriyada ee Afrika” shulcadaasi guumaysi diidka ee ifaysay Soomaaliyana waxay qayb ka aheyd ummadihii kale ee Qaarada madow ee halganka ugu jirey hanashada xoriyada.
Maanta oo kale 15-kii May 1943 waxaa u suurta gashey 13 dhalinyaro Soomaaliyeed ah inay dhibada u taagan xisbigii la magac baxay SYC (Somali Youth Club ) ama ururuka dhalinyarada Soomaaliyeed, kaasi oo markii dambe u xuubsiibtey ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL (Somali Youth League), sanadkii 1947-kii bishii May maanta oo kale ayaa ururka SYL si rasmi ah magacaasi u qaatey .
Xiligaasi waxaa ururka dhisey 13 dhalinayaro ah kuwaasi oo kala ahaa
1. C/qaadir Sheekh Saqaawadiin. Waxa uu ku dhashay Degmada Tiyeeglow ee ka tirsan Gobolka Bakool sanadku markuu ahaa 1919kii. ( xiligaasi wuxu jitey 24 sano.
2. Max’ed Xirsi Nuur (Siidii), waxa uu ku dhashay Magaalaa Mareeg oo ka tirsan Gobolka Galguduud sanadku markuu ahaa 1915kii, xiligaasi wuxuu jirey 28 sano.
3. Yaasiin Xaaji Cismaan Sharma’arke , waxa uu ku dhashay Degmada Hobyo oo ka tirsan Gobolka Mudug sanadkii 1917kii (xiligaasi wuxuu jirey 26 sano
4. Xaaji Maxamed Xuseen Max’ed waxa uu ku dhashay Muqdisho, Gobolka Banaadir sanadkii 1917kii (xiligaasi wuxuu jirey 26 sano)
5. Cismaan Geedi Raage, waxa uu ku dhashay Muqdisho, Gobolka Banaadir sanadkii 1925kii (xiligaasi wuxuu jirey 18 sano)
6. Dheere Xaaji Dheere. Waxa uu ku dhashay Muqdisho, Gobolka Banaadir sanadkii 1926kii Xiligaasi wuxuu jirey 17 sano
7. Daahir Xaaji Cusmaan. Waxa uu ku dhashay Degmada Hobyo ee Gobolka Mudug sanadkii 1925kii (xiligaasi wuxuu jirey 18 sano ah)
8. Cali Xasan Maslax waxa uu ku dhashay Degmada Hobyo ee Gobolka Mudug sanadkii 1927kii (xiligaasi wuxuu jirey 24 sano )
9. Maxamed Cali Nuur, waxa uu ku dhashay Degmada Shangaani oo ka tirsan Gobolka Banaadir, sanadkii 1927kii (xiligaas wuxuu jirey 16 sano)
10. Maxamed Faarax Hilowle waxa uu ku dhashay Mareeg oo ka tirsan Gobolka Galgaduud sanadkii 1925kii xiligaasi wuxuu jirey 18 sano.
11. Xaaji Maxamed C/llaahi (Xayeesi), Waxa uu ku dhashay Muqdisho, Gobolka Banaadir sanadkii 1918kii(xiligaasi wuxuu jirey 25 sano)
12. Huudoow Macallin Cabdulle waxa uu ku dhashay Mareerey oo ka tirsan Gobolka Sh/Hoose sanadkii 1926kii (xiligaasi wuxuu jirey 17 sano)
13. Maxamed Cusmaan Baarbe waxa uu ku dhashay Baardheere oo ka tirsan Gobolka Gedo sanadkii 1910kii(xiligaasi wuxuu jirey 33 sano)
Waxaa ururkii SYL sanadkaasi xoghaye loo doortey Cabdulaahi Ciise Max’uud oo isugu ahaa ra’isalwasaarihii xukuumadii daakhaliga aheyd ee ka horeysay xiligii gobanimada la qaatey.
Ururka SYL wuxuu shaaca ka qaadey qorshihihiisii siyaasadeed waxaana uu sheegay in u taagan yahay xornimo gaarsiinta Ummada Soomaaliyeed, iyadoo xiligaasi Soomaaliya ay u qaybsaneyd 5 gobol oo gacanta ay ku hayeen guumaystayaashii reer Yurub.
SYL waxay shidey iftiin gobanimo doon ah waxaana hoosta ay ka xariiqdey in ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay hesho gobanimo taam ah, isla markaana la helaa Soomaali weyn.
Dhallinyaraasi SYL waxaa xiligaasi u suurtagashey in ay mideeyaan shacabka Soomaaliyeed si looga hor tago gumeysiga , iyaga oo aaminsanaa haddii la helo midnimo laga guuleysan doono gumeysiga isla markaasina waxaa quluubtooddii ku weyneyd waddaniyadda oo ay wax walba ay ka hormsiin jireen si ay u gaaraan ujeeddooyinkoodda ku xusnaa dastuurka xisbiga SYL oo ahayd in shacabka Soomaaliyeed la gaarsiyo xornimo taam ah iyo in la helo Soomaaliyeed weyn.
Xisbigii SYL waxaa la soo gudboonaadey turaanturooyin badan iyo hagardaamooyin badan oo la doonayey in lagu wiiqo ujeedooyinkooda gobanimo doon, waxaana ay taasi kaga gudbeen isku duubni, hal adeyg, aqoon, iyo dadaal kasta oo ay ku gaari karaan inay ku mideeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Inkastoo badi dadkii Soomaaliyeed ay xiligaasi si weyn ugu bisleyn qiimaha xornimada, laakin waxaa quluubtooda arintaasi ku shubey xisbigii SYL oo si weyn ugu dadaalay in Soomaalida laga dhaadhiciyo qiimaha xornimada.
Intii uu socdey halgankii SYL ee ay hormoodka ka ahaayeen baadi goobta xornimada ummada Soomaaliyeed waxaa jirey dad tiro yar oo Soomaali ah oo la dhacsanaa ku hoos jirka heeryada guumaystaha, waxaana dadkaasi ay ku xirnaayeen nidaamkii guumaystaha Talyaaniga.
Dadkaasi guumaysi kalkaalka ahaa waxay qaarkood ku biireen xisbigii SYL si ay u kala dhantaalaan orodkii ama ruclihii loogu jirey xornimo gaarsiinta ummada Soomaaliyeed.
Cali Xuseen oo ahaa ninkii Xisbihii SYL u qaabilsanaa dhanka suugaanta wuxuu gabayadii uu tiriyey ku muujin jirey inay SYL ay ka mid yihiin dad doonaya in ay jilbaha qabtaan dadaalka xisbiga. waana halka ay murti Soomaaliyeed ka tiri “Baadida nin baa kula day dayi oo doonayen daa’in abidkaa inaad hesho”.
Sidoo kale Axmed Xaaji Suleymaan oo dhanka qoraalada u qaabilsanaa xisbiga ayaa mar uu ka hadley shir ay lahaayeen golihii xisbigii SYL wuxuu ku sheegay in xisbiga ay ka mid yihiin dad diidan in xisbiga ku guuleysto ujeedooyinkiisa.
Si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin in xisbigii SYL uu kaalinta ugu balaaran ku lahaa hanashadii xornimada ummada Soomaaliyeed ee la hantey sanadkii 1960-kii, inkastoo ujeedooyinkii dhalinyaradii 13-ka ahaa ee SYL aan wali la gaarin 50 sano ka dib, tiiyoo waliba ay meesha ku jirto in labadii gobo lee Koonfur iyo Waqooyi ee xornimada qaatey 1960-kii ay hada Goboladii waqooyi sheeganayaan inay yihiin dawlad madaxbanaan.
Halka gobolkii Koonfureed uu yahay mid ay la degeen dagaalo mudo 20 sano ka badan ka aloosnaa gobolada dalka, tiiyoo ay u sii dheer tahay in maanta ay halis ku jirto midnimadii guud ee gobolkaasi, maadama ay soo baxeen maamulo u muuqanaya kuwa aan u hiilineyn riyadii SYL.
SYL sidee ku aasaasantey ?
Horaantii sanadkii 1943-kii ayaa waxaa sheekaystey sida ay taariikhyahano ii sheegeen C/qaadir Sheekh Sakhaawadiin iyo Yaasiin Xaaji Cusmaan Sharmark oo rag saaxiibo ah oo si weyn isugu xirnaa, islana socon jirey mar kasta, waxay kawahadleen sidii ummada Soomaaliyeed uga bixi laheyd nidaamkii guumaysiga.
Labadaas nin ee dhalinyarada ahaa waxay midba uu jirey 24 iyo 26 sano waxay mudo ka sheekaysanayeen sidii bal guumaystaha looga xoroobi lahaa, waxaana C/qadir Sheekh Sakhaawadiin uu soo jeediyey fikir ahaa in la aasaaso xibsi Islaami ah oo dadka mideeya, isla markaana ka saara guumaysiga, laakin Yaasin Xaaji Cismaan ayaa wuxuu soo jeediyey fikir kale oo ahaa in xisbiga laga dhigo mid siyaasi ah oo shacabka oo dhan matala.
Ka dib wahadaladii labada nine e dhalinyarada ah waxaa ku soo biirey dhalinyaro kale waxaana la isku raacay in la dhiso golle ama naadi dhalinyaro oo ay isku bartaan dhalinyarada, islamarkaana dhalinyaradu wax isku baraan, iyadoo la baranayo Luuqada Ingiriiska oo xiligaasi aheyd mid ku cusbeyd gobolada Koonfureed.
Kulankaasi dhalinyaradu waxay isla garteen in la dhiso golle dhalinyaro inta laga gaarayo waqti ku haboon in la dhiso xisbi siyaasi ah, waxaana la dhisey golaha dhalinyarada Soomaaliyeed SYC (Somali Youth Club), waxaana xiligaasi ay aheyd 15-kii May 1943-kii.
In xukuumadda Ingriiska ee dalka heysata loo qoro codsi ay ku doonayaa in ay furtaan Naadi la yiraahdo SYC (Somali Youth Club) oo dhalinyarada ku kulanto.
In la dejiyo barnaamij ku meel gaar ah oo dabooli kara qorshaha shaqo ee loo baahanyahay lagama-maarmaana u ah howlaha dhaliyarada.
Markii ay qoreen codsigii ayay 13 kii dhalinyaro waxay tageen xafiiskii xaakimkii isticmaarka ee Ingriiska u fadhiyay Muqdisho waxyna u gudbiyeen codsigoodii, iyadoo qaar ka mid ah dhalintaas ay qabeen in fekerkooda guuleysan doono halka qaarna ay qabeen in ay xarig muteysan doonaan iskaba daa in codsigoodu u hirgalo,laakiin wuxuu ugu jawaabay oraahdii caanka baxday ee aheyd:-
“Waxaad ka koobantihiin dhalinyardiina qabiilo kala duwan waxaana hubaal ah in aadan kuwa hishiin Karin feker iyo ra’yi toona, aniga waxaan idiin arkaa dhurwaayo iyo ari xero lagu wada xareeyay, sideed naadi ugu hishiin kartaan khilaaf la’aan..”
Hase yeeshee, dhalintii 13ka aheyd oo aan hadal kulul ku celin karin madaxa mustacmaradda ayaa ugu jawaabay “Hadalkaaga waxaan ka dhiganeynaa cashar aan ka faa’iideysano,waxaana barbaarin doonnaa Dhurwaayada, si aysan ariga u cunin,mana fogaan doonto in aad aragto anagoo ku wada nool Naadiga oo aan wax muran iyo khilaaf uusan ka dhex jirin”.
Maalmo ayay jawaab ka sugayeen ka dibna waxaa la soo gaarsiiyay warqad lagu xusay in Ingriisku uu hadda ku jiro dagaal uusanna u baahneyn in siyaasadda la farageliyo, balse loo ogolaaday in ay furtaan naadi dhalinta ay ku kulmaan waxna ku bartaan.
Kulankii ugu horeeyayba waxay iska dhex doorteen madaxdii hoggamin laheyd naadiga C/qaadir Sheekh Sakhaawadiin ayay guddoomiye u doorteen halka Xaaji Maxamed Xuseen iyo Maxamed Xirsi Nuur(Siidii) loo doortay ku xigeeno iyadoo Yaasiin Xaaji Cusmaana loo doortay Xoghaye.
Xisbiga oo ujeedadiisa fog ay aheyd ka xoreynta dalka gumeystaha ku soo duulay ayaa wuxuu ka dhigtay talabadiisii ugu horeysay ee uu qaado la dagaalanka qabyaaladaa iyo midab kala sooca.
Laga soo bilaabo sanadkii 1943-kii waxaa Xisbiga SYL laga furay gobollada dalka Soomaaliya oo idil, waxaana sii kordhay taageerada uu helayo taasi oo aheyd mid ay u dhan yihiin Ummada Soomaaliyeed sida qaybaha Odayaasha, Culima’udiinka, dhalinyarada, Haweenka, & Ganacsatada.
Damaca gumeeystayaasha Ingiriiska oo ka dhawaajiyey inuu rabo in Soomaaliya oo idil loo dhiibo iyo Talyaaniga oo u xusulduubayey in la soo celiyo maamulkiisii.
Goor dambe oo xisbigii uu meel fiican gaarsiiyey halgankiisii gobanimo doonka ayaa waxaa geeriyoodey xoghayihii xisbiga Yaasin Xaaji Cusmaan Sharma’arke waxaana uu ku dardaarmey in jagadiisii loo magacaabo Halgame Cabdulaahi Ciise Max’uud oo xiligaasi ahaa wakiilkii SYL ee magaalada Baladweyne. halkaasi ayaa laga soo wadey Cabdulaahi Ciise waxaana uu qabtey jagada xoghayaha guud ee SYL, isagoo hayey xilkaasi ilaa iyo ay SYL ay keentey guusha xoriyada ummada Soomaaliyeed, waxaana Cabdulaahi Ciise loo magacaabey Ra’isalwasaarihii xukuumada daakhilga aheyd ee Soomaaliya intii aan xoriyada si buuxda loo qaadan
Dhinaca kalena waxaa taasi ku lamaansan daqaro, haarro & wadno goyn weyn oo xiligan lagu hayo midnimadii dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iyadoo ay dhici karto awlaadii 13-ka dhalinyaro ee SYL ay maanta ku lug leeyihiin in dalka loo kala googooyo iyadoo ay haatan soo kordhayaan nidaam cusub oo ah in tuulo, degmo & gobolka kasta uu sheegto dawlad taasi oo ay u sii dheertahay toabaan calan & tobanaan madaxweyneyaal oo ay yar tahay in maskaxdooda ay ku jirto dawlad loo dhan yahay, midnimo & qaranimada Soomaaliyeed.
Waxaa nasiib daro weyn ah in 13-kii dhalinyarada SYL ee hormuudka u ahaa horiyada Ummada Soomaaliyeed oo qaarkood ay ka yaraayeen 20 sano halkii ay ka diideen guumeysi in dalka uu sii xukumo inay jiraan siyaasiyiin ka da’a weyn, ka aqoon badan, ka waayo aragsan in aanay laheyn haykal & himilo qaranimo ayna dhici karto in caasimado ajanabi ah inay laga maamulayo amaba ay dhici karto inay ka sugayaan wixii ay dalkooda u sameyn lahaayeen.